လမ်းခွဲပြတ်စဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေနဲ့ နန်းသူဇာ – Askstyle
လမ်းခွဲပြတ်စဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေနဲ့ နန်းသူဇာ
CeleConnections ပရိသတ္ႀကီးေရ လတ္တေလာမွာ ပရိသတ္ေတြၾကား ဂယက္ထခဲ့တဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္ ေက်ာ္ထြဋ္ေဆြနဲ႔ နန္းသူဇာတို႔ အခ်စ္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းခြဲျပတ္စဲေၾကာင္းကို “ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လမ္းခြဲလိုက္ပါၿပီ။ေသြးေအးသြားတဲ့ ေန႔က်ရွင္းျပပါမယ္ ။ အခုေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။ ” ဆိုတဲ့ စာေလးနဲ႔ ေက်ာ္ထြဋ္ေဆြ ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး နန္းသူဇာရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ My Day မွာလည္း “ အရာရာ ငါ့ရဲ႕ အမွားပါ ” လို႔ တင္လာခဲ့တာပါ။
အဆိုေတာ္ ေက်ာ္ထြဋ္ေဆြ ရဲ႕ ပိုစ့္ေအာက္မွာ ခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ စိုးရိမ္ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ၿပီး ခ်စ္သူသက္တမ္း (၉)ႏွစ္ေက်ာ္ရွိတဲ့ Idol အႏုပညာရွင္စုံတြဲတစ္တြဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လမ္းမခြဲၾကဖို႔ မွတ္ခ်က္ေတြေပးေနၾကတာေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္အခ်စ္ေရးတကယ္ပဲ ျပတ္စဲသြားၾကတာလားဆိုတာကို ပရိသတ္ေတြကေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာလို႔ ဆိုရမွာပါ။
ဒီေန႔မနက္မွာေတာ့ နန္းသူဇာအေကာင့္ကေန “ Surprise …. မနက္ျဖန္ Valentine’s Day အတြက္
Music Video အသစ္ထြက္ပါမယ္။V7Entertainment , Myanmar Media 7, 7th Sense Creation Nann Thuzar page တို႔မွာ တင္မွာပါ။Video တင္ရင္ share ကူၾကပါဦး ” ဆိုတဲ့ စာေလးနဲ႔ Music MV Cover Art ေလးကို တင္လာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စိုးရိမ္ေနတဲ့ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ လမ္းခြဲၿပီထင္ေနတာ သီခ်င္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ေတာ္ေသးပါတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ေတြေပး ေနၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ CeleConnections ပရိသတ္ႀကီးလည္း ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ နန္းသူဇာတို႔ စုံတြဲေလး ကိုခ်စ္ရင္မွတ္ခ်က္တစ္ခုခုေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။
Source : Nann Thuzar
CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရေ လတ်တလောမှာ ပရိသတ်တွေကြား ဂယက်ထခဲ့တဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် အဆိုတော် ကျော်ထွဋ်ဆွေနဲ့ နန်းသူဇာတို့ အချစ်ရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းခွဲပြတ်စဲကြောင်းကို “ ကျွန်တော်တို့ လမ်းခွဲလိုက်ပါပြီ။သွေးအေးသွားတဲ့ နေ့ကျရှင်းပြပါမယ် ။ အခုတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ” ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေ ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး နန်းသူဇာရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ My Day မှာလည်း “ အရာရာ ငါ့ရဲ့ အမှားပါ ” လို့ တင်လာခဲ့တာပါ။
အဆိုတော် ကျော်ထွဋ်ဆွေ ရဲ့ ပိုစ့်အောက်မှာ ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ စိုးရိမ်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပြီး ချစ်သူသက်တမ်း (၉)နှစ်ကျော်ရှိတဲ့ Idol အနုပညာရှင်စုံတွဲတစ်တွဲ ဖြစ်တာကြောင့် လမ်းမခွဲကြဖို့ မှတ်ချက်တွေပေးနေကြတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်အချစ်ရေးတကယ်ပဲ ပြတ်စဲသွားကြတာလားဆိုတာကို ပရိသတ်တွေကစောင့်ကြည့်နေကြတာလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒီနေ့မနက်မှာတော့ နန်းသူဇာအကောင့်ကနေ “ Surprise …. မနက်ဖြန် Valentine’s Day အတွက်
Music Video အသစ်ထွက်ပါမယ်။V7Entertainment , Myanmar Media 7, 7th Sense Creation Nann Thuzar page တို့မှာ တင်မှာပါ။Video တင်ရင် share ကူကြပါဦး ” ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ Music MV Cover Art လေးကို တင်လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ လမ်းခွဲပြီထင်နေတာ သီချင်းဖြစ်တာကြောင့် တော်သေးပါတယ်လို့ မှတ်ချက်တွေပေး နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ CeleConnections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ နန်းသူဇာတို့ စုံတွဲလေး ကိုချစ်ရင်မှတ်ချက်တစ်ခုခုပေးခဲ့ပါဦးနော်။